Mpanamboatra ambongadiny sy polymer mpamokatra sy mpamatsy | Dongli
Resins Rafitra Matrix Polymer Fisehoana endrika ara-batana Haben'ny potika Gravity manokana Lanjana fandefasana Manaova fahaiza-manao Leachable
DL-1 Polypropylene Vakana boribory fotsy 02.5-4.0mm 0.9-0.95 mg / ml 300-350 g / L 98% 3%
DL-2 Polypropylene Vakana boribory fotsy Φ1.3 ± 0.1mmL1.4 ± 0.1mm 0.88-0.92 mg / ml 500-570 g / L 98% 3%
p Polypropylene Vakana boribory fotsy 0.7-0.9mm 1.14-1.16 mg / ml 620-720 g / L 98% 3%
Ity vokatra ity dia tsy misy vondrona mavitrika ary tsy misy fiasan'ny fifanakalozana ion. Ny hakitroka dia mifehy matetika eo anelanelan'ny resin'ny anion sy cation mba hampisaraka ny resin'ny anion sy cation ary hisorohana ny fandotoana ny hazondamosin'ny vatan'ny anion sy cation mandritra ny fanavaozana, mba hahatonga ny fitomboana ho feno kokoa.
Ny resina inert dia ampiasaina indrindra amin'ny fitsaboana rano misy atiny betsaka; Ny fanalefahana rano betsaka sy ny fitsaboana dealkali; Fanamafisana ny asidra fako sy ny alkaly; Fitsaboana rano maloto elektrôlika misy varahina sy nikela; Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy fitsaboana ny ranon-javatra maloto, ny fanasarahana sy ny fanadiovana ny zava-mahadomelina biokimika. Betsaka ny olona tsy mazava momba ny fiasa sy ny fampiasana resins inert. Andao hojerentsika izao manaraka izao:
1. Izy io dia mitana ny andraikitry ny fizarana voajanahary mandritra ny famerenana amin'ny laoniny.
2. Mandritra ny fandidiana, dia afaka manakana ny resina tsara izy mba tsy hanakanana ny lavaka fivoahana na ny elanelan'ny satroka sivana.
3. Amboary ny tahan'ny famenoana resina. Ny kalitaon'ny fandriana mitsingevana dia mifandraika amin'ny tahan'ny famenoana resina. Ny tahan'ny famenoana dia kely loatra ka tsy afaka mamorona fandriana; Raha avo loatra ny tahan'ny famenoana dia ho fenoina ny resina aorian'ny fanovana sy fanitarana, ary ny baolina fotsy dia mety hanana anjara toerana kely amin'ny fifehezana.
Fitandremana ny fampiasana resin tsy azo ihodivirana
Ity karazana resina ity dia marin-toerana ao anatin'ny fitehirizana sy ny fampiasa mahazatra. Tsy afa-mivoaka anaty rano, asidra, alkaly ary solvent organika izy io ary tsy mahazaka azy ireo.
1. Ny fikirakirana, ny fandefasana ary ny famoahana entana dia tokony ho malemy paika, marin-toerana ary tsy tapaka, aza voa mafy. Raha mando sy malama ny tany dia tandremo sao misolelaka.
2. Ny mari-pana fitehirizana an'ity fitaovana ity dia tsy tokony ho ambony noho ny 90 ℃, ary ny hafanan'ny serivisy dia tokony ho 180 ℃.
3. Ny mari-pana fitahirizana dia mihoatra ny 0 ℃ amin'ny toetr'andro lena. Azafady mba afatory tsara ilay fonosana raha sanatria very rano mandritra ny fitahirizana; Raha sendra tsy ampy rano, ny resina maina dia tokony alemana anaty etanol mandritra ny 2 ora, diovina amin'ny rano madio, ary avy eo averina averina na ampiasaina.
4. Sakano ny baolina amin'ny hatsiaka sy ny triatra amin'ny ririnina. Raha hita ny hatsiaka dia atsoniho miadana amin'ny hafanan'ny efitrano.
5. Amin'ny dingan'ny fitaterana na fitehirizana dia voarara tanteraka ny manangona fofona, akora misy poizina ary oksida mahery.
Teo aloha: Resina fandriana mifangaro
Manaraka: Resin'ny Adsorptive Macroporous